I-9 yezona ziNgcaciso zeNgcaciso
Ezi zi-9 zokutshuntshwa ziye zatshintsha ikhondo lembali yolwaphulo-mthetho
Nangona ilizwi liqalile ekupheleni kwekhulu le-17, ukuthunjwa kuyinto evelele nje-kwaye izigwenxa azizange zithathwe ngcamango yokubamba abantu kunye nokufuna imirhumo enkulu yemali yokubuyela kwabo kude kube malunga nekhulu elinamanci mahlanu kwiminyaka edlulileyo. Ngezantsi, uza kufumana uluhlu lweziganeko zokunxwaba ezidumileyo zembali, ezivela kwi-disappearance kaCharley Ross ngo-1874 ukuya kubuyiselwa ku-Walter Kwok, oomashishini waseHong Kong, ngo-1997, emva kokuhlawula i-dollar yenkulungwane yenkulungwane.
UCharley Ross (1874)
Ngokuqinisekileyo akukho mntu uphilayo namhlanje ukhumbula igama likaCharley Ross-kodwa ngokugqithiseleyo wonke umntu uyaziqhelanisa negama elithi "musa ukuthatha i-candy kubantu abangabazi," eyasasazwa ngokukhawulwa kwalowo mntwana. Ngomhla owonandisayo ngo-1874, kwiindawo ezinemihlaba ecebileyo yaseFiladelphia, uCharley oneminyaka emine wenyuka waya kwinqwelo ekhwele ihashe waza wathabatha i-candy-kunye noyise wathatha uluhlu lwamanqaku ehlawulelo afuna imali engama-20,000. isigidi sesigidi namhlanje). Kwiinyanga ezintlanu kamva, kwadutshulwa amadoda amabini ebudeni beBrooklyn, kwaye omnye wabo wavuma, ngaphambi kokufa kwakhe, yena kunye nomlingane wakhe bathabathe uRoss. Nangona abazali bakhe baqhubeka bekhangela uCharley bonke ubomi babo, akazange afumaneke (indoda enye eyathi yayiyi-Ross omdala, ngo-1934, yayingumntu oyinyaniso).
Eddie Cudahy (1900)
Indodana eneminyaka engama-16 yomfama oma-Omaha ocebileyo, u-Eddie Cudahy watyhulwa esitratweni ngelixa eqhuba i-errand; Ngentsasa olulandelayo uyise wathola inqaku lehlawulelo elifuna imali eyi-25,000 yeeRandi (kwaye ivakalisa isifo esibi kakhulu sikaCharley Ross, owayethunjwe kwikota ye-1 ngaphambili). UCudahy Sr. wabuyela ngokukhawuleza imali kwi-point point drop, kwaye unyana wakhe wabuyela ekhaya lakhe emva kweeyure ezimbalwa emva koko, engazange akhatywe. Nangona yayiphelile kwaye yenziwa ngokukhawuleza, ukuthunjwa kukaCudahy kwafumene inani elibanzi lokupapashwa kwenkcazo ngelo xesha, kwaye kwakukho i-coda engaqondakaliyo: umntu osetyenziselwa ulwaphulo-mthetho ngo-1905 wafunyaniswa unetyala (nangona u-preponderance of the evidence waxelelwa ngaye), kwaye kwiminyaka embalwa emva kokumxolela kwakhe wathatha idilesi yesifundo kwaye yabonakala nakwiifilimu ezimbalwa.
UCharles Lindbergh, uJr. (1932)
UBruno Hauptmann, onetyala lokuthunjwa kukaLindbergh. APA / Getty Izithombe
Kule ndlela ekuthunjweni kweyona nto idume kakhulu kwimbali yanamhlanje, ukutshatyalaliswa kukaCharles Lindbergh, uJr. ngo-1932 kwavelisa iindaba ezininzi emhlabeni wonke njengokuba ubaba wayebaleka phezu kolwandle lwaseAtlantiki ngo-1927. UMongameli uHerbert Hoover wayekwazisa ngokwakhe; U-Al Capone, entolongweni, wazinikela ekusebenzisaneni kwakhe phantsi komhlaba; kunye nendoda eyayityhafisa le nyala, u-Herbert Norman Schwarzkopf, wanikwa ihlonipho emva kweminyaka emva kokuba nguyise kaNorman Schwarzkopf, jikelele emva kwe- Operation Desert Storm . Ukuthunjwa kwahlanganiswa ukususela ekuqaleni-ababenzileyo babulala ngengozi-nyanga-nyanga engama-20 kwindlela yokumkhupha ekhaya laseLindbergh-kwaye baninzi abantu abasakholelwa ukuba indoda ekugqibeleni inetyala kwaye yenzelwe ulwaphulo-mthetho, uBruno Hauptmann , yaqulunqwa. (Ukulungelelanisa, uHuptmann ubonakala enetyala, nangona umtshutshisi kwimeko ephezulu, okanye ngokukodwa eyenziwe, ububungqina obunobungqina obunobungqina.)
UFrank Sinatra, uJr. (1963)
UFrank Sinatra, uJr (ephakathi). Getty Images
Njengoko unokuba uvakaliswe ngoku, akulula ukuba nguyise wootata owaziwayo . Xa wayeneminyaka eyi-19, uFrank Sinatra, uJr., wayesanda kuqalisa ukuzimisela umsebenzi wakhe wokuzibonakalisa-biz xa wayehluthwa yizithuthuthu ezivela kwikasino yaseLas Vegas. Uyise wakhe wahlawula ngokukhawuleza ihlawulelo lama-240,000, kwaye kungekudala emva koko abenzi bobubi babanjwa, bathutselwa, baza bathunyelwa entolongweni (nangona ekugqibeleni baphululwa nge-parole). Umgca wecala kummandla osentshonalanga wukuthi uFrank Sinatra, uSr. wayebekele ukuthunjwa ukuze athole igama lendodana yakhe kwiintloko - kodwa ukususela ngoFrank Jr. wabanjwa emva kweeveki emva kokubulawa kukaJohn F. Kennedy , umhlobo osondeleyo waseSinatra , omnye ucinga ukuba uFrank, uSr. ayengayi kuba yimeko efanelekileyo yengqondo kumsebenzi onzima wokubambisana.
UJohn Paul Getty III (1973)
Ngaba wakha weva ngale nkwenkwana eyakhala imvu? UJohn Paul Getty III, umzukulu we-oli tycoon uJo. Paul Getty, wayeqhele ukuhlambalaza ngokubamba kwakhe ukuthunjwa ukuze ekugqibeleni anqobe imali ephuma kwi-granddad yakhe. NgoJulayi ka-1973, uJohn Paul oneminyaka engama-16 wabanjelwa ngokwenene ngelixa ehambo lwaseRoma, abaphangi bafuna inkululeko yezigidi eziyi-17. J. Paul Getty wenqaba ukuhlawula, kwaye emva kweenyanga ezimbalwa, wamkela indlebe kaJohn Paul kwi-imeyile-apho wazinikela ngemali eyi-2.2 yezigidi, ngenxa yokuba loo nto yayingumlinganiselo omkhulu onokubango ngokusemthethweni njengokwenyuswa kwentlawulo kunye nokuxoxisana, ekugqibeleni wavuma i-$ 2.9 yezigidi). Ekugqibeleni, abantu abayisithoba base-Italy baboshwa ngenxa yoluphulo-mthetho, kodwa babini kuphela abagwetywa; Ininzi yemali yentlawulelo ayizange iphindwe; U-Getty III wenza uphando lweplastiki ukuze atshintshe indlebe yakhe ecwecwe ngo-1977.
Ngaba uke waziva nge-Symbionese Liberation Army? Akukho mntu waseMelika owenzayo, mhlawumbi, kwaze kwaba yilapho iqela elisekhohlo lithatha u- Patty Hearst oneminyaka eli-19 ubudala-umzukulwana we-multimillionaire umvakalisi uWilliam Randolph Hearst-ngowe-1974. I-SLA ayifuni ihlawulelo ngalunye ; Kunoko, babefuna intsapho ye-Hearst ukuba isebenzise impembelelo yayo yezopolitiko ukukhulula amalungu amabini e-SLA entolongweni (okanye, ehluleka oko, ubuncinane ukuthenga ukutya okungamazigidi ezimbalwa zamaRandi). Yintoni eyenza ukuthunjwa kwe-Hearst kwiintloko kwakubonakala ukuguqulwa kukaPatty Hearst kwisizathu se-SLA; uthathe inxaxheba kwi-bhanki eyodwa yokuphanga kwaye waphula ivenkile yokuthengisa kunye nomlilo wesikhali ngokuzenzekelayo. Ngelo xesha u-Hearst wabanjwa ngowe-1975, kwacaca ukuba uye wafumana uhlobo oluthile olunobunzima lobungqingili; nangona kunjalo, wayetyala inkohlakalo yokuphanga. Ngokuqinisekileyo ibheyile kungekudala emva koko, uPatty Hearst watshata, wayenabantwana ababini, kwaye wabandakanyeka kwimibutho eyahlukeneyo.
USamuel Bronfman (1975)
USamuel Bronfman (ngasekhohlo). Getty Images
Ukuthunjwa ngo-1975 kaSamuel Bronfman - unyana kaSeagram u-tycoon uEdgar Bronfman, uSr.-wadlala njengento ethile kwi-TV ibonisa iDallas okanye iDynasty . Emva kokubanjwa kwakhe, uSam Bronfman wanikela ngenkokhelo yakhe yentlawulelo nge-audiotape, kwaye emva kokuba uyise ehlawulise i-2.3 million yezigidi ezifunyenwe yi-abductee kwindlu efuphiweyo kwinkampani yomlilo waseNew York, uMel Patrick Lynch. ULynch kunye nomlingani wakhe, uDominic Byrne, bathi ukuthunjwa kwakuyi-setup: uLynch noSam Bronfman babenomdla, kwaye uBronfman wenza ukuthumba kwakhe ukukhipha imali kuyise, esongela ukubonisa ubungqingili bukaLynch ukuba akazange ancede. Ngethuba lesilingo, amanzi ayekhatywe ngokwaneleyo ngo-Byrne noLynch ukuba bahlulwe ngokuthunjwa, kodwa bafunyaniswe netyala le-larceny. Kamva, uSamuel Bronfman wadluliselwa njengendlalifa kwi-Seagram empire ngokuthanda u-Edgar Bronfman Jr .; akucaci ukuba ukuthunjwa okusoloko kuye kwambulisile emehlweni kayise.
Akukho konke ukuthunjwa okwenzekayo e-US Umzekelo weklastiki kwimeko ka-Aldo Moro, osombululi weNtaliyane owaziwayo (kunye neNdunankulu yexesha eli-2) owabanjelwa ngowe-1978 ngeqela eliguqukayo elaziwa ngokuba yiBlack Brigades , elabulala abahlanu balindi bakhe kule nkqubo. AmaBrigades aBomvu awazange afune isihlengo samandulo; Kunoko, babefuna ukuba urhulumente waseItaly akhululwe abambalwa babo basejele. Abasemagunyeni benqabile ukuxoxisana, bathi le nto inokuvula iminyango yokubanjwa kwangaphambili, kwaye uMoro ekugqibeleni wahlanganiswa ngengubo, wadutyhulwa ngamaxesha alishumi, wadiliza kwisiqu se Renault. Akukho mntu wagwetywa ngenxa yokuthunjwa nokubulala, u-Aldo Moro kunye nokubulala, kwaye iminyaka ukususela ekuboneni ukuchuma kweengcamango ezahlukeneyo zengqungquthela , inkulu phakathi kwazo ukuba i-US (ngokubambisana ne-NATO) ayimvumekanga imigaqo kaMoro kwaye yayifuna ukuba iphume emfanekisweni.
UWalter Kwok (1997)
Indodana endala yomninimzi wangempela waseHong Kong, uWalter Kwok wanyunjwa ngo-1997 ngumntu ogqithisileyo wecalster wendawo obizwa ngokuba ngu "Big Spender," waqhubeka eboshwe emgodini wezinkuni ezine iintsuku ezinzima. Ukuze amkhulule, uyise kaKwok wakhokhela enye yemirhumo emikhulu kwimbali, ngaphezu kwesigidi sezigidigidi zeedola ngemali. "I-Big Spender" yabanjwa ngokukhawuleza emva koko yabulawa emva kwesilingo kwilizwe laseTshayina; U-Kwok, okwangoku, wayephinda athathe indima yakhe ebusweni bukayise waza waba ngu-200 wabantu abacebileyo behlabathi. Ukutshutshiswa kweentlobo kubonakala ngathi uye washiya isiqholo semvakalelo, nangona kunjalo; ngo-2008, u-Kwok wathatha ixesha elide lokushiya ngaphandle kwenkampani yakhe, waza waqala ukuphikisana nabazalwana bakhe, abo bamangalela ukuba bamfumanisa ukuba wayeyindoda ephazamisayo.
'Iprojekthi yeRosie' yiGraeme Simsion - Imibuzo yeClub Club Ingxoxo
Isingeniso kuKhuphiswano lweMonopolistic
Yiyiphi i-Direction eyenza iinqwelo ezihamba ngeCanama Canal?